सप्तरंग गृह पृष्ठकभरस्टोरीराष्ट्रियदेशअर्थविश्व खबरसप्तरंगखेलकुददृष्टिकोणसम्पादकीयआगन्तुक	मुख्य समाचार
बन्दले जनजीवन प्रभावित »	लोकमानविरुद्धको मुद्दा सरेको सर्‍यै »	एक सय ५७ न्यायाधीशले लिए शपथ »	Tuesday, Jun 18, 2013<	/p>	सप्तरंग जंगलमा दुधेबालिका
एउटा अफ्रिकन जंगलमा जनावरसँगै संगत गरेर हुर्किएकी १० वर्षीया बालिकाका मन छुने तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् । ती तस्बिर संग्रहित ‘टिप्पी : माई बुक अफ अफ्रिका’ नामक किताब हाले विश्वव्यापी रूपमा बजारमा आएको छ । किताबमा बालिकाले हात्ती (जसलाई उनी दाइ भन्ने गर्छिन्) र चितुवा (जसलाई उनी बेस्ट फ्रेन्ड भन्ने गर्छिन्) सित मित्रता गाँसेको घतलाग्दा दृश्य छन् । पूरा नाम टिप्पी बेन्जामिन ओकान्ति डेग्रे भएकी बालिका नामिबियामा जन्मेकी थिइन् । उनका फ्रेन्च आमाबाबु सिल्भी रोबर्ट र अलेन डेग्रे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर हुन् । उनीहरू आफ्नी सानी छोरीलाई लिएर अफ्रिकाको मौलिक र रोमाञ्चक भ्रमणमा निस्केका थिए ।टिप्पीको जन्म भएको देश नामिबियामा यो साहसिक यात्रा सुरु भएको थियो, जुन बोस्टवाना, जिम्बाबे र साउथ अफ्रिकाजस्ता देशका घना जंगलसम्म पुग्यो । ‘अरूभन्दा पनि बाँदरले छोरीको दूधको बोतल खोस्लान् भन्ने पीर हुन्थ्यो हरेक दिन,’ आमा सिल्भी भन्छिन्, ‘हाम्रो यात्रा मान्छेले कल्पनै गर्न नसक्ने आश्चर्यजनक थियो ।’उनीहरू जंगलभित्र एउटा टेन्ट गाडेर बस्थे । जंगलको बसाइका क्रममा टिप्पी यति धेरै अभ्यस्त भइन् कि उनी जंगली जनावरसित डराउनै छाडिन् । अस्ट्रिचको ढाडमा बस्नेदेखि लिएर हात्तीको सँुडमा टेकेर नाच्नसमेत बाँकी राखिनन् । ‘उनी जनावरसित एकदमै सहज हुन्थिन् । उनी आफ्ना आँखा र हृदयले जंगली जनावरसित कुरा गर्थिन्,’ आमा भन्छिन्, ‘उनलाई कत्ति पनि डर थिएन ।’टिप्पीले अबु नामको भीमकाय अफ्रिकन हात्तीसित गहिरो मित्रता बनाएकी थिइन् । सिल्भीका अनुसार त्यति ठूलो हात्तीका अगाडि आफू कति सानी छु भन्नेसमेत उनलाई महसुस हुँदैनथ्यो । ‘उनी मसित जसरी कुरा गर्छिन्, अबुसित पनि त्यसरी नै कुरा गर्थिन् । त्यहाँ बस्ने आदिवासीले उनलाई जनावरसित कुरा गर्ने सानी केटी भन्थे,’ सिल्भीले सम्झिन् । डरलाग्दा मानिने जंगली जनावर मानिससित पहिलेदेखि नै अभ्यस्त भएकाले नै टिप्पी उनीहरूसित झ्याम्मिन सम्भव भएको हो । उनले संगत गरेका अधिकांश जनावर बाबुआमा नभएका र स्थानीय कृषकले हुर्काएका थिए । उनीहरू मानिसलाई हत्तपत्त आक्रमण गर्दैनथे । तथापि, उनको सुरक्षाप्रति आमाबुबा सचेत थिए । ‘आक्रमण गर्दैनन् भन्दैमा सबै जनावरअघि उनलाई त्यत्तिकै त कहाँ छाड्थ्यौँ र ?’ सिल्भीले भनिन् । उनका अनुसार यदि जंगली जनावर डराए, घाइते भए भने उनीहरू कि त भाग्छन्, कि आक्रमण गर्छन् । त्यसैले आफ्नी सानी छोरीमाथि सधँै नजर राख्ने गरेको उनले बताइन् । अलिकति पनि डर लाग्यो भने टिप्पीलाई उनले जनावरको नजिक पर्न दिन्नथिन् । टिप्पीले एउटा सिंहको बच्चा मुफासासित फोटो खिचाएकी थिइन्, जसमा मुफासाले उनको हातको बुढी औँला चुसिरहेको थियो । अर्को वर्ष त्यही ठाउँमा गएर हेर्दा मुफासा ठूलो भएर डरलाग्दो रूप लिइसकेको सिल्भीले बताइन् । ‘मुफासा उनी नजिकै आयो र उसको लामो पुच्छरले टिप्पीलाई मुसार्‍यो, बिरालोले जसरी । उनी झन्डै लडिन्, मैले गएर समात्नुपर्‍यो,’ सिल्भीले भनिन् । यति लामो यात्राको दौरान टिप्पीलाई दुईचोटि मात्रै जनावरले टोकेका रहेछन् ।जनावर मात्रै होइन, टिप्पीलाई देखेर आदिवासीहरू पनि खुब रमाउँथे । आफूभन्दा फरक र राम्री भएकीले उनीहरू टिप्पीलाई खेलाउन औधी रुचाउँथे । ‘अफ्रिकनहरू अरूका बच्चालाई माया गर्छन्, विशेषगरी गोरा बच्चालाई,’ सिल्भी भन्छिन्, ‘कहिलेकाहीँ त हामी टिप्पीलाई पूरै दिन उनीहरूका साथमा छाडिदिने गथ्र्यौं । रातिचाहिँ आफूसँगै सुताउँथ्यौँ ।’ आफ्नो रोमाञ्चक यात्रा सकेर टिप्पीको परिवार युरोप फर्कियो, जतिवेला टिप्पी १० वर्षकी भएकी थिइन् । सुरुमा उनलाई पेरिसको सहरी जीवनमा अभ्यस्त हुन मुस्किल परेको थियो । आफूले भेटेका र साथी बनाएका जनावरलाई उनी खुब सम्झिन्थिन् । आमाबाबुले टिप्पीको मन बहलाउन एउटा सुगा पालेका थिए । त्यो सुगाले टिप्पीलाई कहिल्यै साथ छाड्दैनथ्यो । जहाँ जाँदा पनि टिप्पीले सुगालाई सँगै लैजान्थिन् । सुत्दा पनि उनी आफ्नो छातीमा राख्थिन् । टिप्पीको एक मात्र मिल्ने साथी त्यही चरो भएको थियो । टिप्पी अहिले २३ वर्षकी भइन् । उनी सिनेमामा डिग्री तेस्रो वर्ष अध्ययनरत छिन् । अहिले फरक किसिमको जंगलमा उनी बाँचिरहेकी छिन्, कंक्रिटको । तर, अफ्रिकामा उनले बिताएका क्षण सिनेमाको पर्दाझैँ उनको मानसपटलमा नाचिरहन्छन् ।
Add new comment परिवारको दबाबले कम्युनिस्ट बन्न सकिनँ
गोपालराज पहाडी, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य
सामन्त नबन्न थरै फेरेँखास थर दाहाल हो मेरो । संखुवासभाको मादी राम्वेनी–१ मा दाहालहरूको ठूलो बिर्ता थियो । राजकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बिर्ता थियो हाम्रो । ०१५/१६ सालतिर ६ कक्षामा पढ्थँे । निकै विद्रोही स्वभावको थिएँ त्यतिखेर । परिवारमा गरिबहरूलाई थिचोमिचो गर्ने संस्कार थियो । त्यस्तो भेदभाव हुनुहुँदैन भनेर बाआमा र काकासँग झगडा गर्थें । उनीहरू पनि हामी जस्तै हुन्, त्यसैले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, थिचोमिचो गर्नुहुन्न भनिरहन्थेँ ।६ कक्षामा म फेल भएँ । कक्षा दोहोर्‍याउँदा गणेशबहादुर प्रसार्इं सरसँग नजिक हुने मौका मिल्यो । उहाँ त्यतिखेर वामपन्थी विचारधाराको हुनुहुन्थ्यो । उहाँले वामपन्थ र विद्रोहतिर लाग्न प्रेरित गर्नुभयो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘तँ विद्रोही छस् । समाज बदल्नुपर्छ । समाज बदल्न आफू पनि बदलिनुपर्छ । तेरा बाउबाजे सबै सामन्ती छन् । यिनीहरूका विरुद्धमा तँ खुलेर लाग्नुपर्छ ।’ उहाँले नै मलाई सामन्ती संस्कारबाट छुटकारा पाउन दाहाल थर नलेख्, पहाडी लेख् भन्नुभयो । मलाई ठीक लाग्यो र त्यसैवेलादेखि दाहालको साटो पहाडी लेख्न थालेँ ।स्कुल जाँदा र आउँदा म सरसँगै हिँड्थेँ । बाटोभरि परिवर्तनका कुरा गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘समाज बदल्नुपर्छ । तँ विद्रोही छस् । यो देशको ठूलो वामपन्थी नेता बन्छस् ।’ ठूली आमाका छोरा पनि कम्युनिस्ट हुनुहुन्थ्यो । त्यसले मलाई बल मिल्थ्यो । उहाँ चिनियाँ कम्युनिस्ट पत्रिका देखाएर मलाई आकर्षित गर्नुहुन्थ्यो । तर, परिवारको प्रेसरले मलाई गाह्रो थियो । काका लीलानाथ र मामा पद्मनाथले ‘हामी धेरै वर्ष राजनीति गर्दैनौँ, तैँले हाम्रो बाटो हिँड्नुपर्छ’ भनेर दबाब दिनुहन्थ्यो । बुबाचाहिँ सीधासादा हुनुहुन्थ्यो । तर, आमा एकदमै बाठी र महत्त्वाकांक्षी अनि उत्साही पनि । आमाले लाखौँ रुपैयाँ गाउँमा दान पनि गर्नुभएको थियो । छोरो गाउँको जमिनदार, मुखिया बनोस् भन्ने आमाको चाहना थियो । परिवारका सबैले मलाई ठूलो मान्छे बनाउन चाहनुभएको थियो, तर समाजको असल मान्छे बनाउने उहाँहरूको प्रयत्न थियो वा थिएन, म जान्दिनँ । त्यतिखेर धनकुटाको बडाहाकिम सबैभन्दा ठूला मान्छे थिए । मैले निरन्तर परिवारजनबाट बडाहाकिमभन्दा ठूलो बन्नुपर्ने दबाब खेपेँ । ‘हामीले बडाहाकिमको चाकरीमा जीवन गुजार्‍यौँ, तँ त्योभन्दा ठूलो हुुनुपर्छ’ भन्ने परिवारको कुरा थियो ।माटाको डल्लालाई जस्तो बनायो त्यस्तै हुन्छ भनेजस्तै लीलानाथ र पद्मनाथको दबाबबाट म उम्कनै सकिनँ । आमालाई पनि डर थियो, कम्युनिस्ट भएपछि अर्कैले सम्पत्ति खाइदिन्छ भन्ने । त्यसकारण आमाले मलाई कम्युनिस्ट बन्नबाट रोक्नुभयो । काका र मामाको दबाबका अगाडि म कम्युनिस्ट बन्नै सकिनँ । मोहीले तोकेको मूल्यमा जग्गा बाँडेँसंखुवासभामा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो ‘उमलिङ’ बिर्ता थियो । मुरीका आधारमा जग्गाको मूल्यांकन हुन्थ्यो र त्यसकै आधारमा मोहीले जग्गाको तिरो तिर्ने गर्थे । उनीहरूले जग्गा कमाएबापत १४ वर्षदेखि नगद, तिरो र कुत तिर्न सकेका थिएनन् । त्यसैले मैले जग्गाको आयस्ता नै मिनाहा गरिदिएँ । र, उनीहरूलाई नै जग्गाको मूल्य तोक्न लगाएर जग्गा बाँडिदिएँ । हाम्रो दाहाल खानदानलाई गाउँमा सामन्त भनिन्थ्यो । बाजेहरूका क्रियाकलाप पनि सामन्ती चरित्रका थिए । शक्तिको आडमा मेरो बाजेले एउटा भण्डारी बाहुनलाई ‘दमार्इं’ बनाइदिनुभएको थियो । जुद्धशमशेरसम्म उजुरी पुगे पनि बाहुनले बदमासी गरेको भन्दै जात घटाइयो । यस्ता सामन्ती व्यवहार अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । त्यसैले वर्षौंदेखि खेती–किसानी गर्ने मोहीहरूलाई तिरोविना नै जग्गा बाँडिदिएको थिएँ । संखुवासभाको बिर्ता मोहीलाई बाँडिदिएपछि सबैभन्दा बढी माया गर्ने काकाले नै मुखमा थुकिदिए । तर, म रिसाइनँ । थुक पुछेँ अनि हाँसेँ । घरमा कोही बोलेनन् । परिवारले नै मुद्दा हाल्यो । तर, ०३८/३९ सालतिर मैले नै मुद्दा जितँे । केही वर्ष परिवारमा सहज अवस्था भएन । तर, बिस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै गयो । विवाहको साइतै जुरेन विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा लागेँ । ०२१ सालमा बनारसमा आइए पढ्दा छात्रसंघमा बसेर राजनीति गरेँ । फर्केपछि मोरङबाट ०२३ सालमा बिए पास गरेँ र एमए पढ्न काठमाडौं आउन खोजेँ । तर, साथीहरूले रोके । उतै आन्दोलनमा लागियो । यसैबीचमा राम्रो घरबाट बिहेको प्रस्ताव आएको थियो । तर, मलाई इच्छा भएन । घरको जेठो छोरो भएकाले आमाले एकदमै दबाब दिनुभयो । तर, विवाह नै नगर्ने अडान लिएँ । पछि विवाह गरौँला भनेर आमालाई टारिदिएँ, अनि आन्दोलनमा होमिएँ ।बिपीले ‘मुलुकलाई स्वर्ग बनाउनुपर्छ’ भन्नुभएको थियो । उहाँले भन्दा हामी मर्न पनि तयार हुन्थ्याँै । विवाहभन्दा मुलुकका लागि प्रजातन्त्र नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने लाग्यो । विवाह नगर्ने योजना पनि थिएन । तर, पनि मेरो विवाहको लगन कहिल्यै जुरेन । मांगलिक ग्रहमा परेकाको विवाह हँुदैन भन्थे । यो सिद्धान्तअनुसार पो विवाह नभएको हो कि ?म सीधासादा थिएँ । त्यसैले कलेज पढ्दा कसैलाई प्रस्ताव राखिनँ । केटीहरूले प्रस्ताव त राख्थे । तर, सम्पन्न परिवारकाले प्रस्ताव राख्दा पनि मलाई बिहे गरूँजस्तो लागेन । अहिले ६६ वर्षको भएँ । विवाह नगरेकामा कुनै पश्चात्ताप छैन । नयाँ अनुहार नयाँ बाटो कांग्रेसमा लागेपछि बुझेँ– कांग्रेस पार्टी के हो भनेर । प्रजातन्त्र र परिवर्तनका लागि झन्डा बोक्ने पार्टी कांग्रेस हो भन्ने बुझेँ, बिपीको संगत गरेर । तर, अहिले प्रजातन्त्र र परिवर्तनलाई कांग्रेसले कत्तिको गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ? यो महत्त्वपूर्ण सवाल हो । हामी आफैँले कसरी कांग्रेसका मूल्य, मान्यतालाई पछ्याएका छौँ ? त्यो अहं सवाल हो । छलफलको विषय हो । २००७ सालमा आन्दोलन गर्‍यौँ, १५ सालमा चुनाव गर्‍यौँ अनि राजा धपायौँ भनेर मात्रै कांग्रेस उम्कन मिल्दैन । अबको बाटो तय हुनुपर्छ । अबको कांग्रेस नयाँ अनुहार, नयाँ बाटो अनि नयाँ विचार बोक्ने हुनुपर्छ । जनता र कार्यकर्ताको माग पनि यही हो । भ्रष्टाचार र एजेन्टका लागि कांग्रेस जन्मिएको होइन । यो त कार्यकर्ताको पार्टी हो । हामी जसरी हिँड्नुपर्ने हो, त्यसरी हिँड्न सकेनौँ । हिजो कांग्रेसले बोलेका कुरामा देशभर छलफल हुन्थ्यो । तर, अहिले प्रतिक्रियामा नै कांग्रेसको राजनीति सीमित भएको छ । सरकार बन्नुअघि खिलराज रेग्मीलाई सरकारप्रमुख बनाउन हुँदैन भन्ने केन्द्रीय सदस्यहरूको माग सुनिएन । तर, अहिले पुन: रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । अब खिलराजको राजीनामा प्रधानन्यायाधीशबाट होइन, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट हुनुपर्छ । मुलुकको समस्या राजनीतिक हो । राजनीतिक समस्या कर्मचारीले समाधान गर्न सक्दैनन् । यो सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन । बरु यसले प्रजातन्त्र समाप्तिको घोषणा गर्छ । प्रस्तुति : रमेश सापकोटा Comments (1) अमिक शेरचनको कन्चटमा पेस्तोल तेस्र्याएछन्
मीननाथ देवकोटा, अध्यक्ष, नेकपा राष्ट्रवादी
नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलको गठबन्धमा थरीथरीका पार्टी छन् । कति नामै नसुनेका त कति पार्टीका नामै अनौठा छन् । ३३ दलको सूचीमा रहेको एउटा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रवादी छ । यसका अध्यक्ष छन्, मीननाथ देवकोटा । उनी पूर्व एकता केन्द्रका नेता रहेछन् । माओवादी र नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एकता केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रियाको विरोध गरेका उनले ती पार्टीको एकतापछि नयाँ पार्टी बनाएका रहेछन् । ३३ दलको आन्दोलनका क्रममा भेटिएका उनले माओवादी र एकता केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रियाका रोचक तथ्य र आफ्नो पार्टी गठनको कथा सुनाए । ००००५६ भदौ २९ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले अमिक शेरचनको नेतृत्वको तत्कालीन जनमोर्चा नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा मसाललाई तत्कालीन नेकपा माओवादीसँग एकीकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसको एक महिनापछि काठमाडौंमा राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण भयो, जनमोर्चा र मसालका कार्यकर्ताको । प्रशिक्षणमा नारायणकाजीले भनेका थिए, ‘वामपन्थी शक्तिबीचको एकीकरण अहिलेको विकल्प र आवश्यकता हो । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएको छ । यो शक्तिलाई अब खेर जान दिनुहँुदैन । हामीले आफ्नो तरिकाले यसको उपयोग गर्नुपर्छ । ऊसँग एकता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ नारायणकाजीले प्रशिक्षणमा राखेको यो विषय परिमार्जनसहित पारित भयो त्यहाँ । प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित हुनुको मतलब थियो– प्रस्तावप्रति केही असन्तुष्ट व्यक्ति पनि थिए, जसले राजनीतिक–वैचारिक स्पष्टता खोजेका थिए, एकताको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरिरहेका थिए । दुई/चार व्यक्तिका हितका लागि सिंगो पार्टीलाई कुनै पार्टीमा विलय गराउनुहुँदैन भन्ने हामीहरूको मत थियो । यस्तो मत राख्नेमा जनमोर्चाका अध्यक्ष अमिक शेरचन, लीलामणि पोखरेल, साध्यबहादुर भण्डारी, भरत दाहाल, दानबहादुर विश्वकर्मा, घनश्याम शर्मा पौडेललगायत नेताहरू थियौँ । प्रशिक्षणमा जोडतोडका साथ हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ । हामीले राजनीतिक–वैचारिक तरिकाले बुझाउने कोसिस भएन । बरु नारायणकाजी समूहले भनेको थियो– यो एकीकरण प्रक्रिया भाँड्न पाइँदैन, बिथोल्ने कोसिस कसैले गर्न पाइँदैन । उहाँहरूले निरन्तर प्राविधिक कुरा गर्नुभयो, वैचारिक कुरामा प्रवेश गर्न नै खोज्नुभएन । शान्तिप्रक्रियामा आएको माओवादीलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मत थियो । उपयोग भन्ने कुरा अर्थपूर्ण थियो । त्यतिवेला हामीले भनेका थियौँ– त्यति ठूलो जनमत भएको पार्टीमा जाँदा कुनै शक्तिलाई बलियो बनाउन जाने हो वा वामपन्थी आन्दोलनको हितका लागि ? हामीले यो प्रश्न तीनवटा आशंकाले उठाएका थियौँ । त्यतिवेला प्रचण्ड, किरणलाई हेर्ने विषयमा पार्टीको आफ्नै दृष्टिकोण थियो । प्रचण्ड दरबारपरस्त हुन्, बाबुराम ‘रअ’का मान्छे हुन्, किरण अझै जनयुद्धमा जान चाहन्छन्, तीन नेतालाई हेर्ने दृष्टिकोण यस्तो थियो । त्यो कुनै कुरा नारायणकाजीले सच्चाउनुभएको थिएन । उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नगरी एकताको कुरा आएपछि हामीले प्रश्न उठाएका थियौँ । हुन त हामी पनि एकीकरण गर्न सकिने पक्षमा थियौँ, तर त्यसअघि पर्याप्त छलफल र गृहकार्यको आवश्यकता हुन्छ भनेका थियौँ । हामीले भनेका थियौँ, ‘माओवादी ठूलो शक्ति हो, हामी त्यहाँ जाँदा हाम्रो भूमिका के हुन्छ ? हामी व्यक्तिका पछाडि जाने वा संस्थाका पछाडि ?’ हामीले बारम्बार प्रश्न उठाए पनि नारायणकाजीले जवाफ दिएनन् । हाम्रो कुराको रेस्पोन्स नै गरेनन् । बरु हामीलाई भनियो– यी एकताविरोधी हुन्, अमिक, लीलामणि, साध्यबहादुर, भरत आए आउँछन्, नआए पनि एकता प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यतिवेला नारायणकाजी, गिरिराजमणि पोखरेलहरूले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षालाई जोड दिएका थिए । उनीहरूले ठूलो पार्टीमा गएर लाभ लिन चाहेका थिए । आज माओवादीमा भागबन्डाका लागि उनीहरूले गर्ने बार्गेनिङले उनीहरूको चरित्र देखाउँछ । ०६५ मंसिरमा खरिपाटी भेला भयो, मसाल र जनमोर्चाको संयुक्त रूपमा । दुई दिन जनमोर्चाको र दुई दिन मसालको बैठक बस्यो । गम्भीर छलफल भयो एकताबारे । मसालको बैठकमा हामी फरक मत राख्ने साथीहरूलाई त्यहाँ कुनै कुरा राख्न दिइएन । यत्तिकै एकीकरणमा जाने निर्णय गराइयो । जनमोर्चाको बैठकमा हामीले कुरा उठायाँै– कसैलाई मन्त्री पदमा लैजान एकीकरण आवश्यक छैन । मसालले गरेको निर्णय जबर्जस्ती जनमोर्चाको बैठकमा पनि लागू गर्ने योजना बनाइयो । विरोध गर्नेलाई तह लगाउने नारायणकाजीहरूको नीति देखियो । मसालको बैठक सकिएपछि धेरैले अमिक शेरचनलाई खुबै गाली गरे । अमिक स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा उनको नाम बेचेर लुटेकाहरूले पनि अमिकलाई गाली गरेको देख्यौँ । कसै–कसैले त अमिकलाई डोरी ल्याएर बाँध्ने र पल्टाइदिने कुरा गरे । हामी हेरेको हेर्‍यै भयौँ । बोल्नै नहुने शब्द बोले । जनमोर्चाको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो रातिको कुरा हो । अमिकको टाउकोमा पेस्तोल तेस्र्याएका रहेछन् त्यसैराति । यो मैले देखेको होइन । अरू साथीहरूले भनेका थिए बैठकमा । डर, धम्की, त्रास दिएछन् । बेपत्ता पार्नेसम्म भनेछन् । बैठकमा जनमोर्चाको बहुमत पक्ष एकतामा नजाने पक्षमा थियो । यति धेरै टर्चर दिएछन् कि अमिक र लीलामणिको क्रमश: बोली फेरियो । नरम हुन थाले । तर, हामीले उठाएका कुराको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म एकतामा जाँदैनाँै भन्यौँ । सुन्नमा आएको थियो– अमिकलाई उपप्रधानमन्त्री र लीलामणिलाई अमेरिकाको राजदूत बनाइदिने आश्वासन दिएका रहेछन् फकाउनलाई । ०००माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि नारायणकाजीले भारत दौडाहा थाले । गिरिजाप्रसादसँग बाक्लो भेटघाट गर्न थाले । प्रचण्डका चिठी गिरिजाकहाँ, गिरिजाका चिठी प्रचण्डकहाँ, दुवै चिठी भारत पुर्‍याउन थाले । एकतापूर्वको नारायणकाजीले माओवादीलाई उग्रवामपन्थी फाँसीवादी शक्ति भन्थे । यसले वामपन्थी आन्दोलनलाई टेवा पुर्‍याउँदैन, हानि मात्र गर्छ भन्थे । पार्टीभित्र नारायणकाजीका विषयमा कुरा हुन्थे– उनी ‘रअ’ को तलब खान्थे, त्यसैको निर्देशनमा उनले पार्टी एकता गराएका हुन् । नारायणकाजीको स्वभाव अवसरवादी हो । आफ्नो फाइदाका लागि उनी जे पनि गर्छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताका कुरा गरे पनि आत्मसमर्पणवादी शैली हो । बाहिर देखाउने दाँत र खाने दाँत भिन्नाभिन्नै छन् । जस्तो कि एउटा कुरा हेराँै न, प्रचण्डले जनयुद्धकालमा पनि नारायणकाजीलाई पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेका थिए । तर, उनले जोखिम मोल्न चाहेनन् । जनयुद्धकालभर माओवादीलाई गाली मात्र गरे । शान्तिप्रक्रियामा आएपछि एकता गरे । यसले उनको प्रवृत्ति देखाउँछ । ०००खरिपार्टी भेलापछि प्रकाशजी र अमिकजीहरू माओवादीसँगको एकीकरणमा जानुभयो । तत्कालीन माओवादीसँग उहाँहरू एकीकरणमा गएपछि माओवादीको नामका अगाडि एकीकृत थपिएको हो । उहाँहरू एकतामा गए पनि दानबहादुर विश्वकर्मा, साध्यबहादुर भण्डारी, भरत दाहाललगायतका हामीले संघर्ष चलायौँ । दानबहादुर जनमोर्चाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै नेतृत्वमा जनमोर्चा पुनगर्ठन गर्‍यौँ । भरत उपाध्यक्ष र साध्यबहादुर महासचिव बन्नुभयो । जनमोर्चा पुनगर्ठन भएपछि पनि पार्टीभित्र विवाद मत्थर भएन । विवादको खास राजनीतिक कारण थिएन, प्राविधिक कारण थियो । तीनवटा समूह भए । एउटा भरतजीको, अर्को साध्यजीको र एउटा मेरो । साध्य र भरत एक–अर्कालाई आरोप लगाउँथे । साध्यबहादुरको भनाइ थियो– भरत दाहाल माओवादीको पैसा खाएर पुनगर्ठन गरेको जनमोर्चालाई सिध्याउन लागेका छन् । उता, भरतको साध्यबहादुरमाथि आरोप थियो– उद्योगी–व्यापारीसँगै पैसा उठाउँछन्, इन्टरनेटमार्फत विदेशीसँग पैसा माग्छन् । सीमा समस्या र राष्ट्रियताको कुरा उनले विदेशीसँग पैसा जुटाउने मात्र गर्छन् ।’ मलाई चाहिँ यी दुईजनाको आरोप–प्रत्यारोपले पार्टीलाई हित गर्दैन भन्ने लागेको थियो । साध्य र भरतले दानबहादुरलाई नै अध्यक्ष बनाउनसमेत मानेका थिएनन् । यो कुरामा उनीहरू दुवै सहमत थिए । यस्तै–यस्तै विवादले पुनगर्ठन भएको जनमोर्चा विघटन हुन पुग्यो । भरत मातृकाको माओवादीतिर जानुभयो । साध्यले एक्लै जनमोर्चा चलाउनुभयो । म नयाँ पार्टी गठनमा लागेँ ।०००साथीहरूकै पहलमा हामीले ०६७ माघ ५ मा नयाँ पार्टी बनायाँै । पार्टीको नाम नेकपा राष्ट्रवादी राख्याँै । राष्ट्रवादीको विषयमा चर्चा हुन्छ । गैरकम्युनिस्टहरूले राख्ने नाम किन राखेको ? यो प्रश्न धेरैले उठाएका छन् । मैले भन्ने गरेको छु– कम्युनिस्टहरू राष्ट्रियताका नारा उठाउँछन्, सत्तामा गएपछि कार्यान्वयन गर्दैनन् । यस्तो अवस्थामा नाममै राष्ट्रियता जोड्दा सान्दर्भिक हुन्छ भन्ने लागेर यसो गरेको हो । यसमा अरू कुनै कारण छैन । अहिले हाम्रो पार्टीको २१ जिल्लामा संगठन छ । केन्द्रीय समिति ३१ जनाको छ । ३३ दलमा सहभागी भएर आन्दोलनमा लागेका छौँ । हामी अवसरको होइन, निष्ठाको राजनीति गर्न खोजेका छौँ ।
प्रस्तुति : नेत्र पन्थी
Comments (3) कुन पुस्तक बढी बिके प्रदर्शनीमा ?
जेठ १० बाट राजधानीको भृकुटीमण्डपमा चलेको सत्रौँ नेपाल शिक्षा तथा पुस्तक प्रदर्शनी शनिबार सकिएको छ । करिब दुई करोड रुपैयाँको व्यापार गरेको प्रदर्शनीमा एक लाखभन्दा बढी पाठकले अवलोकन गरेको आयोजक नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले दाबी गरेको छ । यस्ता पुस्तक प्रदर्शनी व्यवसायीका लागि मात्र होइन, लेखकका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण अवसर मानिन्छ । कारण हो– यस्ता प्रदर्शनीले पुस्तकको व्यापारको मात्रै होइन, लेखकको लोकप्रियताको पनि मापन हुन्छ । कुन लेखकको पुस्तक लोकप्रिय छ भन्ने आँकलन गर्न यस्ता प्रदर्शनी सहयोगी हुन्छन् ।यस्ता प्रदर्शनीमा बिक्री हुने साहित्य र जीवनदर्शनका पुस्तकले अन्य विधाको तुलनामा चर्चा पाउने गर्छन् । त्यसैले कतिपय प्रकाशकले यस्ता प्रदर्शनीलाई नै लक्षित गरेर पुस्तक निकाल्छन् भने कतिले ‘स्टक क्लियरेन्स’को मौका मान्छन् । यसपटकको प्रदर्शनीमा पनि प्रकाशकले मौकाको उपयोग गरे ।प्रदर्शनी सकिए पनि कुन पुस्तक कति बिक्री भयो भन्ने यकिन तथ्यांक प्रकाशक तथा वितरकले तयार गरिसकेका छैनन् । तर, सामान्यतया कुन पुस्तक बढी बिक्रि भयो भन्ने अनुमान भने उनीहरूसँग छ । त्यसो त स्टलअनुसार बढी बिक्री हुने पुस्तकको तथ्यांक फरक छ । त्यसैले उनीहरूको सूचीमा प्रदर्शनी अवधिमै धेरै बिक्री हुने पुस्तकबाहेक अन्य पुस्तक पनि छन् । कतिपय प्रकाशकले आफूले प्रकाशन गरेको पुस्तक आफ्नो स्टलमा मात्रै राखेका छन् । त्यसो हुँदा उनीहरूले आफ्नै प्रकाशन बढी बेचेका छन् । त्यसरी आफ्नो प्रकाशन मात्रै राख्ने स्टलमध्ये एक हो– रत्न पुस्तक भण्डार । भण्डारका बजारप्रतिनिधि कुमार घिमिरेका अनुसार भण्डारले प्रदर्शनीलाई लक्षित गरेर यस वर्ष कुनै पनि पुस्तक निकालेको थिएन । त्यसैले धेरै बिक्री हुने पुस्तक पनि भएन । उनले भने, ‘साधारणतया उस्तै अनुपातमा हाम्रा पुस्तक बिक्री भइरहेका छन् । त्यसमा भैरव अर्यालको निबन्धसंग्रह जय भुँडी र मुनामदन अगाडि छ ।’ भण्डारले प्रदर्शनीलाई आफूले प्रकाशन गरेका पुस्तकबारे जानकारी गराउने अवसरको रूपमा लिएको उनले बताए ।त्यसैगरी, बिएन पुस्तक संसारले पनि स्टलमा अधिकांश पुस्तक आफ्नै राखेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलका अनुसार प्रदर्शनीमा बिएनले सबैभन्दा धेरै बिक्री गरेको साहित्यिक पुस्तक नगेन्द्र न्यौपानेको ऐतिहासिक उपन्यास ‘दरबारकी महारानी’ हो । त्यस्तै, स्वागत नेपालको नयाँ उपन्यास ‘जिगोलो’ र अनुपम रोशीको ‘नांगो मान्छे’ पनि बिएनले धेरै बिक्री गरेको पुस्तकको सूचीमा छ । युवा साहित्यकार अनमोलमणिले सम्पादन गरेको २५ युवा कथाकारको कथा संकलन ‘आजका नेपाली कथा’, अनुपम रोशीको पहिलो उपन्यास ‘कुमारी आमा’, स्वागत नेपालको पहिलो उपन्यास ‘मातृसम्भोग’, धु्रवचन्द्र गौतमको कथा संकलन ‘बीचबजारमा मुद्राबोध’ र भाउपन्थीको कथा संकलन ‘पात्रहीन’ पनि राम्रो बिक्री भएको पौडेलले बताए । स्टलबाट आफैँले लेखेको ‘वैज्ञानिकहरूको संसार’ र ‘आर्किमिडिजको जीवनी’ साहित्यिक पुस्तकभन्दा पनि राम्रो बिक्री भएको पौडेलको दाबी छ । त्यस्तै, बिएनको धेरै बिक्री भएका पुस्तकको सूचीमा रवीन्द्रनाथ टैगोरका उत्कृष्ट कथाको अनुवाद पनि परेको छ ।आफ्नै प्रकाशन राख्ने अर्को स्टल हो– डिकुरा प्रकाशन । डिकुराका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद प्रसार्इंका अनुसार स्टलबाट कमल रिजालको उपन्यास ‘सुकर्म’ सबैभन्दा बढी बिक्री भयो । त्यस्तै, रमेश पौडेलको उपन्यास ‘द सुप्रिम ह्युमन’ डिकुराबाट बढी बिक्री हुने उपन्यासमा पर्‍यो । डिकुराले बढी बिक्री गरेको अरू पुस्तकमा मोदनाथ सादाको नियात्रा ‘पटाया क्रेज’, यादव खरेलको नियात्रासंग्रह ‘समुद्रपारि’, पुण्यप्रसाद प्रसार्इंको उपन्यास ‘आइमाई मान्छे’, किसन थापाले सम्पादन गरेको ‘सर्वश्रेष्ठ नेपाली कथाहरू’लगायत छन् । त्यस्तै, फाइनप्रिन्ट, नेपालयलगायत प्रकाशनको वितरक एजुकेसनल बुक हाउसले ‘विनोद चौधरी स्टुडेन्ट भर्सन’ सबैभन्दा बढी बेचेको पुस्तक हो । मेलालाई नै लक्षित गरेर कम मूल्यमा ‘स्टुडेन्ट भर्सन’ निकालिएको नारायण वाग्लेको दोस्रो उपन्यास ‘मयुर टाइम्स’ र कुन्द दीक्षितको तस्बिरसंग्रह ‘लडाइँमा जनता’ पनि राम्रो बिक्री भएको श्रेष्ठले बताए । हाउसको धेरै बिक्री हुने पुस्तकको सूचीमा जगदीश घिमिरेको उपन्यास ‘सकस’, विनोद चौधरीको अर्को पुस्तक ‘अर्थतन्त्र’, नवीन जिरेलको युद्ध–संस्मरण ‘भीषण दिनहरू’ र राधा पौडेलको युद्ध–संस्मरण ‘खलंगामा हमला’लगायत छन् । त्यस्तै, पैरवी बुक हाउसका खगेन्द्र लामिछानेका अनुसार पत्रकार युवराज घिमिरेको ‘शून्य समय’ उनको स्टलबाट धेरै बिक्री भयो । पुस्तक प्रदर्शनीमै विमोचन गरिएको थियो । हाउसले प्रदर्शनीलाई लक्षित गरेर नयाँ कलेबरमा निकालेको कृष्ण धरावासीको उपन्यास ‘राधा’ पनि धेरै बिक्री गरेको छ । रवीन्द्र समीरको लघुकथासंग्रह ‘अणु र पहाड’ पनि हाउसले धेरै बिक्री गरेको सूचीमा छ । पैरवीको स्टलमा मेलाको अन्तिम दिन हस्ताक्षरका लागि आएका कवि श्यामलको निबन्धसंग्रह ‘रित्तो गाउँ’, राजन मुकारुङको उपन्यास ‘दमिनी भीर’, विश्लेषक चैतन्य मिश्रको ‘पुँजीवाद र नेपाल’लगायत कृति अन्तिम दिन राम्रो बिक्री भए । त्यस्तै, सांग्रिला बुक्सले सबैभन्दा बढी बिक्रीको सूचीमा परेका पुस्तकबाहेक आफ्नो स्टलबाट शारदा शर्माको उपन्यास ‘ताप’, राजन मुकारुङको उपन्यास ‘दमिनी भीर’ र उमा सुवेदीको उपन्यास ‘तोदा’ धेरै बिक्री गरेको सांग्रिलाका पुरन थापाले बताए ।‘खेलौना’ उपन्यास प्रकाशनबाट चर्चामा आएको याम्बुरी बुक प्वाइन्टले प्रदर्शनीमा खेलौनाका साथै मिलन संग्रौलाको कथासंग्रह ‘च्याट गर्ल’ धेरै बेच्यो । त्यस्तै, भर्खरै प्रकाशित दीपक सापकोटाको ‘लोकेसन’, प्रदीपमान तुलाचनको उपन्यास ‘आस’, अश्विनी कोइरालाको अन्तर्वार्तासंग्रह ‘उनी’, फूलमान बलको कवितासंग्रह ‘महाभारतको मैच्याङ’, होमराज आचार्यको उपन्यास ‘टुल्कु’ धेरै बिक्रीको सूचीमा रहेको याम्बुरीका कुयाङ लामाले बताए । शब्दहार क्रिएसनले सबै स्टलबाट धेरै बिक्री भएका पुस्तकबाहेक आफ्नो स्टलबाट होमराज आचार्यको उपन्यास ‘टुल्कु’ बिक्री गरेको छ । मुख्यसचिव लीलामणी पौडेलले पनि टुल्कु उपन्यास किन्नुभएको शब्दहारका रमेश कँडेलले बताए । उनले युग पाठकको उपन्यास ‘उर्गेनको घोडा’ र विद्या सापकोटाको कथासंग्रह ‘निलो तृष्णा’ धेरै बिक्री गरेको बताए । त्यस्तै, मिलन संग्रौलाको ‘च्याट गर्ल’ र दीपक जडितको कथासंग्रह ‘आँपको रूख’ पनि शब्दहारको स्टलबाट धेरै बिक्री पुस्तकको सूचीमा छ । पैरवी प्रकाशनले धेरै प्रकाशकको पुस्तक आफ्नो स्टलमा राखेको थियो । जसले अन्य स्टलमा धेरै बिक्री भएका पुस्तकबाहेक खप्तडबाबाको ‘विचार विज्ञान’ र ‘स्वास्थ्य विज्ञान’ बढी बिक्री गरेको प्रकाशनका प्रबन्ध निर्देशक पदम शिवाकोटीले बताए । उनका अनुसार प्रकाशनको स्टलमा राष्ट्रपतिको जीवनी (टाकुरामा एक्लो मान्छे), प्रदीप नेपालको उपन्यास ‘बर्बरिक’, सञ्चारकर्मी सरोजराज अधिकारीको पुस्तक ‘चक्रव्यूहमा चन्द्रसूर्य’, नारायण ढकालको निबन्धसंग्रह ‘शोकमग्न यात्री’लगायतका पुस्तक बढी बिक्री भए । पाँचपोखरी प्रकाशन गृहले भने आत्मसहयोगी पुस्तक र जीवनी बढी बिक्री गरेको छ । रोशन दाहालले लेखेको ‘गौतम बुद्धको जीवनी’, अच्युत कोइरालाले लेखको ‘स्टिभ जब्स र बिन लादेनको जीवनी’ (टार्गेट बिन लादेन) पाँचपोखरीको स्टलबाट धेरै बिक्री भएको बजारप्रतिनिधि रविन श्रेष्ठले बताए । त्यस्तै, कृष्ण अविरलको नयाँ उपन्यास ‘विष पुरुष’ र हर्मन हेस्सेको उपन्यास ‘सिद्धार्थ’को नेपाली अनुवाद पनि पाँचपोखरीले धेरै नै बिक्री गरेको छ । त्यसैगरी प्रगतिशील पुस्तकलाई प्राथमिकता दिने प्रगति पुस्तक सदनले भूपिनको निबन्धसंग्रह ‘चौबिस रिल’, पत्रकार युवराज घिमिरेको ‘शून्य समय’, बिपी कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’लगायतका पुस्तक धेरै बिक्री गरेको सूचीमा छ ।यस वर्ष प्रदर्शनीमा नेपाली साहित्यका पुस्तकको बिक्री राम्रो भएको प्रकाशक तथा विक्रेता बताउँछन् । ‘यस वर्ष पुस्तक किन्ने सहभागी धेरै आएका छन् । त्यसैले नेपाली पुस्तकको बिक्री निकै राम्रो भयो,’ पैरवी बुक हाउसका खगेन्द्र भट्टराईले भने । विदेशी साहित्यका पुस्तक भने यस वर्ष खासै बिकेनन् । डिकुरा प्रकाशनका पुण्यप्रसाद प्रसाईं भन्छन्, ‘विदेशी प्रकाशनका पुस्तक बेच्नेले नयाँ पुस्तक ल्याउन सकेको देखिएन । फेरि धेरै विदेशी पुस्तकका विक्रेता पाठ्यपुस्तकमा केन्द्रित देखिए ।’ समग्रमा नेपाली प्रकाशकका लागि यस वर्षको प्रदर्शनी निकै उत्साहजनक रहेको आयोजक संस्था नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघका उपाध्यक्ष पदम शिवाकोटीले बताए । उनले भने, ‘यस वर्षको प्रदर्शनी निकै राम्रो भएको छ । पुस्तक किन्ने सहभागी निकै बढेका छन् । नेपाली पुस्तकमा देखिएको आकर्षण नेपाली प्रकाशक र वितरकका लागि राम्रो संकेत हो ।’
कला अनुरागी Comments (1) थप लेखहरु...
त्यो कालो शुक्रबार
युरोपियन फुटबलमा नेमारको चर्चा
गणतन्त्र घोषणाको दिन अत्तालिएका थिए दल हेलिकोप्टरबाट सुदर्शनको उद्धार
नेपाली क्रिकेटर मेरो मुटुमा छन् « सुरुअघिल्लो12345678910पछिल्लोअन्तिम »	JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL	ताजा समाचार